Njikarịcha: Ọdịnaya, athzọ, Ntọala na ntụgharị | Martech Zone
Njikarịcha: Ọdịnaya, athzọ, Ntọala na ntụgharị
Monday, October 7, 2013 Monday, October 7, 2013 Douglas Karr
Ka anyị na-ewere ndị ahịa ọhụụ, ọ ga-afọ nke nta ka anyị kọwaa etu atụmanya si achọta saịtị ndị ahịa anyị, otu ha si abanye na saịtị ahụ, yana otu ha si agbanwe ndị ahịa site na atụmatụ ịre ahịa n'ịntanetị. Ọ dịghị mgbe e mere. Ndị ahịa anyị na-etinye oge dị ukwuu na ibe obibi ha, obere oge na ibe dị n'ime, yana ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge ọ bụla na ibe ọdịda na ntụgharị.
Imirikiti kwenyere na okporo ụzọ ha na saịtị ha dị ka nke a:
Otú ọ dị, nke ahụ ezighi ezi. Ọ bụ ezie na ọtụtụ mmadụ nwere ike ịbanye na ibe ụlọ, ọtụtụ ndị mmadụ na-achọpụta ha site na nyocha na mgbasa ozi mmekọrịta na-abanye site na ibe na ntinye ederede n'ime saịtị ahụ. Ihu akwukwo mbu bu uzo nke gara, ma obu uzo. Nakwa, ndị mmadụ na-eleta site na ọtụtụ ngwaọrụ - mobile, tablet and desktop.
Yabụ, iji nwekwuo ogo nke weebụsaịtị, anyị na-ebuli peeji ọ bụla - ọ bụghị naanị peeji nke ụlọ. Anyị na-akwado ịbawanye visibiliti na ọchụchọ na mgbasa ozi mmekọrịta site na ịnye ọtụtụ ụzọ site na atụmatụ ọdịnaya. Blog posts, peeji nke, infographics, whitepapers, ikpe ọmụmụ, akụkọ na ihe omume… ndị a niile na-enye ọdịnaya enwere ike ịchọta ma kesaa na ntanetị! Anyị na-ahụ na ha kachasị maka ịgagharị na mbadamba ihe nchọgharị yana site na desktọọpụ.
N'ikpeazụ, okwu ikpeazụ anyị ga-ahụ bụ na ndị ahịa anyị enweela nnukwu okporo ụzọ dị mkpa - mana ha anaghị agbanwegharị okporo ụzọ ahụ. Site n’inye onyinye ndị ọzọ, ike na onyinye ọdịnala, ngosi, nbudata, ọnwụnwa, na ụzọ ntụgharị ndị ọzọ, anyị na-ahụ ọtụtụ ndị ahịa na-agbanwe agbanwe.
Ihe kpatara Medium.com Ji Dị Mkpa maka Usoro Mgbasa Ozi Gị
Kwadoro: Ngwọta Mgbasa Mmemme Enterprise